Igbo, John: Lesson 001 - Akwụkwọ ndị na-agbanwe ozioma | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 001 (Introduction)
Akwụkwọ ndị na-agbanwe ozioma
Kraịst kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya ka ha bụrụ ndị àmà ya. O deeghị akụkọ banyere ndụ ya n'onwe ya, o ziteghị akwụkwọ ozi ọ bụla na chọọchị. Ma àgwà ya nwere mmetụta dị ukwuu n'obi ndị na-eso ụzọ ya, bụ ndị Mmụọ Nsọ mere ka ha too Onyenwe ha Jizọs Kraịst. Ha hụrụ na ịhụnanya, ịdị umeala n'obi, ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya bụ ebube dịka nke ọkpara nanị nke Nna, juputara n'amara na eziokwu. Ọ bụ ezie na ndị na-ezisa oziọma bụ Matiu, Mak na Luk mere ka okwu na omume Jisọs doo anya, na alaeze Chineke dị ka ihe mgbaru ọsọ nke ọbịbịa ya, Jọn gosipụtara obi Jizọs na ịhụnanya ya dị nsọ. N'ihi nke a, a na-akpọ ozioma nke Jọn ozi ọma bụ isi, nke bụ okpueze niile akwụkwọ nsọ dị nsọ.
Ònye bụ onye dere Oziọma a?
Ndị nna nke ụka na narị afọ nke abụọ kweere na John, bụ onye na-eso ụzọ Jizọs, bụ onye dere akwụkwọ a pụrụ iche. Ugbu a, onye nkwusa ozioma John kwuru aha ọtụtụ ndị ozi, ma ọ dịghị mgbe ọ na-ekwu banyere aha Jemes nwanne ya ma ọ bụ nke ya n'ihi na o cheghị na ya kwesịrị ka a kpọtụrụ ya aha na Onyenwe ya na Onye Nzọpụta ya. Otú ọ dị, Bishop Irenaeus nke Lyon nke dị na France, dere n'ụzọ doro anya na Jọn, onye na-eso ụzọ Onyenwe anyị bụ onye dabeere na obi ya n'oge Nri Anyasị Ikpeazụ, bụ onye mepụtara ozioma a, ka ọ na-eje ozi na Efesọs Anatol dị n'oge ọchịchị nke Emperor Trajan (98-117 AD).
Ụfọdụ ndị nkatọ na-eche na Jọn, bụ onye dere akwụkwọ ozi a abụghị onye na-eso ụzọ Jizọs, ma otu n'ime ndị okenye nke ụka Efesọs bụ onye na-eso ụzọ Jọn onyeozi, nakwa na edechara ya. Ndị nkatọ a bụ ndị nrọ ma ha amaghị Mmụọ nke eziokwu, nke na-abụghị ụgha, n'ihi na Jọn onyeozi dere oziọma ya na onye mbụ mgbe ọ sịrị, "Anyị wee hụ ebube ya." Ya mere, onye dere akwụkwọ ozi ọma bụ otu n'ime ndị akaebe anya na ndụ, ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Jizọs. Ndị enyi John nọkwa na-agbakwụnye na njedebe nke ozioma ya okwu ahụ, "Onye a bụ onye na-eso ụzọ nke na-agba akaebe banyere ihe ndị a, ma dee ihe ndị a: anyị makwa na àmà ya bụ eziokwu" (Jọn 21:24) . Ha mesiri ike nke John nke mere ka ya onwe ya di iche site na ndi ozi ndi ozo, nke bu na Jisos huru ya n'anya ma kwe ka ya dabere n'obi ya n'oge nzuko nke mbu. Naanị ya bụ onye nwere ike ịjụ Jizọs banyere onye ga-arara ya nye, na-ajụ, sị, "Onyenwe anyị, ònye bụ onye ga-anapụta gị?" (Jọn 13:25).
Jọn bụ nwa okorobịa mgbe Jizọs kpọrọ ya ka o soro ya. Ọ bụ ọdụdụ na gburugburu nke iri na abụọ ndịozi. Ọ bụ onye ọkụ azụ. Aha nna ya bụ Zebedee na aha nne ya bụ Salome. Ya na ezinụlọ ya bi na Betsaida n'akụkụ osimiri Tiberias. O sonyeere Pita, Andru na nwanne ya nwoke bụ James, ya na Filip na Nathaniel mgbe ha gbadara na ndagwurugwu Jọdan nye Jọn Baptizim ka ọ na-akpọ nchegharị. Ndị mmadụ mere ngwa ngwa na ya na Jọn, nwa Zebedi, bụ onye rịọrọ mgbaghara na baptism site n'aka onye Baptist na Osimiri Jọdan. O nwere ike ịbụ onye ikwu nke nnukwu onye nchụàjà bụ Annas n'ihi na ọ maara ha ma nwee ikike ịbanye n'obí. N'ihi ya, ọ nọ nso na ndị ụkọchukwu. Ya mere o kwuru na ozioma ya ihe ndi nkwusa ozioma mere, ihe onye Baptist kwuru banyere Jisos, ya bu na obu Nwa aturu Chineke nke newepu nmehie nke uwa. N'ụzọ dị otú a site na nduzi nke Mmụọ Nsọ, Jọn onyeozi ghọrọ onye na-eso ụzọ Jizọs hụrụ Onyenwe ya Jizọs n'anya karịa ndị ọzọ niile.
Mmekọrịta dị n'etiti Jọn na ndị nkwusa atọ ọzọ
Mgbe Jọn dere ozioma ya, akwụkwọ ozi dịka Matiu, Mak na Luk dịrịrịrị edeworo ma mara ya na chọọchị ahụ ruo oge ụfọdụ. Ndị nkwusa atọ ahụ wepụtara akwụkwọ ha dabere na akwụkwọ Hibru mbụ nke ndịozi zukọtara site n'aka Matiu okwu Jizọs ka ha wee ghara ịla n'iyi, karịsịa n'oge ọtụtụ afọ gara aga ma Onyenwe anyị anwadịbeghị laghachiri. Ikekwe ọ bụ ọrụ dị iche iche nke Jizọs na ihe ndị mere ná ndụ ya ka ọ dị na nchịkọta dị iche. Ndị na-ezisa ozi ọma na-eji nlezianya mee ihe odide ndị a. Luk dibịa na-adabere n'ihe ndi ozo ebe o zutere Meri nne Jisos na ndi akaebe di iche.
Otú ọ dị, Jọn n'onwe ya bụ isi ihe dị mkpa na mgbakwunye na isi ndị ọzọ e kwuru n'elu. Ọ chọghị ikwughachi akụkọ na nkwupụta ndị a maara na chọọchị, ma ọ chọrọ itinye ha. Ọ bụ ezie na oziọma mbụ ahụ kwupụtara ọrụ Jisọs na mpaghara Galili, na-ezo aka nanị otu njem na Jerusalem nke Jizọs rụrụ n'oge ọ na-eje ozi, na-achọta ọnwụ ya n'ebe ahụ, oziọma nke anọ na-egosi anyị ihe Jizọs mere na Jerusalem na mbụ, n'oge na mgbe ozi ya na Galili. Jọn na-agba anyị akaebe na Jizọs nọrọ ugboro atọ n'obodo isi obodo ya, ebe ndị isi nke mba ya jụrụ ya ugboro ugboro. Ma mb͕e ha mesiri ya ike, ha rara Ya nye ka akpọgide Ya n'obe. Ya mere, ihe di mkpa nke Jọn bu na o gosiputara ozi nke Jisos n'etiti ndi Ju na Jerusalem, ebe etiti omenala agba ochie.Onye nkwusa ozioma nke anọ enyeghị ọrụ ebube dị iche iche Jizọs rụrụ, dịka nanị mmadụ isii n'ime ha. Gịnị ka Jọn chọrọ ka ọ ghọta nke a? O kwuputara okwu Jisos dika ihe nke Onye n'ekwu, "MU" na otua ka o kowawara ihe Jisos. Ndị nkwusa atọ mbụ ahụ lekwasịrị anya n'ịkọ banyere omume na ndụ nke Jizọs, ma Jọn tinyekwuru uche n'ịtụle onye ahụ Jizọs n'ebube ya n'ihu anyị. Ma, olee ebe Jọn si nweta okwu ndị dị otú ahụ, nke a na-apụghị ịchọta ndị ọzọ, na nke Jizọs kwuru banyere onwe ya? Ọ bụ Mmụọ Nsọ nke chetara ya banyere ha mgbe Pentikọst gasịrị. N'ihi na Jọn n'onwe ya kwupụtara n'oge dị iche iche na ndị na-eso ụzọ aghọtaghị eziokwu nke ụfọdụ n'ime okwu ndị ahụ Jizọs kwuru ruo mgbe ọ ga-esite n'ọnwụ bilie na ọdịda nke Mmụọ Nsọ n'ahụ ha. N'ụzọ dị otú a, ọ ghọtara mgbe ihe okwu Jizọs pụtara, nke o kwuru banyere onwe ya na nke dị na okwu bụ "MỤ". Ha bu ihe omuma atu nke ozi oma a.
Jọn kwukwara okwu Jizọs, nke o kwuru site n'iche ọdịiche dị iche iche, dịka ìhè na ọchịchịrị, mmụọ na ahụ, eziokwu na ụgha, ndụ na ọnwụ, nakwa dị ka site n'elu na n'okpuru. Ọ na-esiri anyị ike ịchọta ọdịiche ndị a na ozioma ndị ọzọ. Ma Mmụọ Nsọ chetara Jọn mgbe ọtụtụ afọ gasịrị mgbe ọ bi n'ógbè Grik nke mmetụta nke okwu ndị Onyenwe anyị kwuru. O mere ka onye nkesa ozioma mara na Jisos ekwughi okwu n'asusu Hibru nke ndi Hibru, kamakwa o ji okwu Grik nye mba nile.
Gịnị bụ ebumnuche nke Oziọma Jọn?
Jọn achọghị ịchọpụta Jizọs n'ụzọ mmụọ ma ọ bụ nke nwere ọgụgụ isi, ma ọ tụkwasịrị uche karịa ndị ọzọ banyere ofufe ya, adịghị ike ya na akpịrị na-akpọ ya nkụ mgbe ọ nọ n'elu obe. O mekwara ka o doo anya na Jizọs bụ Onye nzọpụta nke ihe a kpọrọ mmadụ na ọ bụghị naanị ndị Juu, n'ihi na ọ bụ Nwa Atụrụ Chineke nke wepụrụ mmehie nke ụwa. Ọ gwara anyị otú Chineke si hụ ụmụ mmadụ n'anya.Ihe ndị a anyị kpọtụrụ aha bụ ụzọ na ihe àmà maka ibute obi na isi nke ozioma a, ya bụ na Jizọs Kraịst bụ Ọkpara Chineke. Oge ebighi ebi ya na ndụ ya n'ụwa, na chi ya n'ime ọdịmma mmadụ, na ikike ya n'adịghị ike ya. Ya mere, na Jisos, Chineke nọ n'etiti umu mmadu.Ebumnuche nke nkọwa nke Jọn agaghị ama Jizọs n'ụzọ nkà ihe ọmụma ma ọ bụ n'ụzọ mgbagwoju anya, ma ịmara Onye Nsọ site na Mmụọ Nsọ na-adabere na okwukwe siri ike. Ya mere o ji okwu ndi a ma ama mechie ozioma ya, "edere ha ka unu we kwere na Jisos bu Kraist, Okpara Chineke, na ikwere na unu puru inwe ndu n'aha ya" (Jọn 20:31). Nkwenye nke ndu nime Chineke nke Jizos bu nzube nke ozioma nke Jọn. Okwukwe a na-emeputa n'ime anyi ndu Chineke, di nso na ndu ebighebi.
Ònye ka e dere Oziọma Jọn?
Akwụkwọ a, juputara na nkwupụta eziokwu banyere Kraịst, edeghị ya iji zisaa ndị na-ekweghị ekwe ozi ọma, ma e dere ya iji wulite chọọchị ahụ ma mee ka o too na Mmụọ. Paul amaliteworị chọọchị dịgasị iche iche na Anatolia na mgbe a tụrụ ya mkpọrọ na Rom, Pita gara ụka ndị a hapụrụ ahapụ ma gbaa ha ume. Mgbe Pita na Pọl nwụrụ, ọtụtụ mgbe n'oge mkpagbu n'okpuru Nero na Rom, Jọn weghaara ha wee biri n'Efesọs, ebe etiti Iso Ụzọ Kraịst n'oge ahụ. Ọ na-azụ ìgwè chọọchị dị iche iche a chụsasịrị na Asia Minor. Onye ọ bụla gụrụ akwụkwọ ozi ya na isi nke abụọ na nke atọ nke Mkpughe ya ghọtara nchegbu na ebumnuche nke onyeozi a, bụ onye mere ka anyị ghọta ịhụnanya Chineke nwere n'ime Jizọs Kraịst. Ọ lụsoro ndị na-akụzi nkà ihe ọmụma bụ ndị jupụtara n'ìgwè ewu na atụrụ ya dị ka anụ ọhịa wolves ma mebie atụrụ ya na echiche efu, iwu ndị siri ike na nnwere onwe na-adịghị ọcha n'ihi na ha ejikọtara eziokwu na echiche efu.
Ndị na-eso ụzọ Jọn Onye Na-eme Baptizim biri na Anatolia, bụ onye kwanyere onye ahụ kpọrọ ha nchegharị karịa Jizọs Onye Nzọpụta. Ha ka na-eche anya Mesaịa ahụ e kwere ná nkwa, na-eche na ọ bịabeghị. Site n'igosi onye Jisos, Jọn negosi ihe ndia nile nke nemegide Kraist. Ọ kpọkwara olu ya na-agba aka megide mmụọ ndị na-emegide ya, sị, "Anyị hụkwara ebube ya, otuto dịka nke ọkpara naanị Ya mụrụ n'aka Nna, juputara n'amara na eziokwu."Ọ dị ka ọtụtụ n'ime ndị natara oziọma a bụ ndị kwere ekwe nke Jentaịl n'ihi na Jọn gbasara n'ihu ha ọtụtụ nkọwa banyere ndụ ndị Juu nke ndị Juu na-ekwesịghị ịkọwara ha. Ọzọkwa, Jọn adabereghị n'oziọma ya n'okwu Jizọs nke e dere n'oge ahụ n'asụsụ Aramaic, na-asụgharị ha n'asụsụ Grik dị ka ndị ọzọ na-ezisa ozi ọma. Kama nke ahụ, ọ na-eji okwu ndị Grik mara na chọọchị ya ma jupụta mmụọ nke Oziọma ahụ ma gbaa akaebe n'okwu Jizọs n'asụsụ Grik dị ọcha na nnwere onwe niile na n'okpuru nduzi nke Mmụọ Nsọ. Ya mere, ozi ọma ya na-ekwu okwu n'ụzọ dị mfe na ịdị omimi nakwa site n'ịgụ okwu karịa okwu niile. Ya mere, Mmụọ Nsọ nyere anyị ozi ọma nke eziokwu ahụ n'ụzọ dị mfe, ka onye ọ bụla na-eto eto nwee ike ịghọta ihe ọ pụtara.
Olee mgbe e dere Oziọma a dị iche iche?
Anyị na-ekele Onyenwe anyị Jizọs na o duziri ndị ọkà mmụta ihe ochie nke Ijipt na Egypt ọtụtụ afọ gara aga ịchọta otu papyrus nke e dere ruo n'afọ 100 AD, bụ nke e dere ederede nke ozioma nke Jọn na ederede doro anya. Site na nchọpụta a, ogologo oge gwụsịrị na nkwụsị nchịgbu ahụ n'ihi na mgbagwoju anya gosiputara na ozioma nke John mara n'afọ 100 AD, ọ bụghị nanị na Asia Minor kamakwa na North Africa. Obi abụọ adịghị ya na a makwaara ya na Rom. Eziokwu a na-ewusi okwukwe anyị ike na Jọn onyeozi doro anya na ọ bụ onye dere ozioma ya, jupụta na Mmụọ Nsọ.
Gịnị bụ ọdịnaya nke Oziọma a?
Ọ naghị adịrị mmadụ mfe iji Akwụkwọ Nsọ e ji ike mmụọ nsọ mee ihe. Ọ na-esiri ike ịkekọrịta ozioma nke Jọn dị iche iche. Ka o sina dị, anyị na-atụ aro ihe ndị na-esonụ:
Ibu nke ìhè Chineke (1:1 - 4:54)
Ìhè ahụ na-enwu n'ọchịchịrị ma ọchịchịrị aghọtaghị ya (5:1 - 11:54)
Ìhè ahụ na-enwu gburugburu gburugburu ndịozi (11:55 - 17:26)
Ìhè ahụ na-emeri ọchịchịrị (18:1 - 21:25)
Onye nkwusa ozioma John nyere iwu ka o chee na ihe yiri mgbaaka, dị ka nke a na-agbanye n'ọhụụ ime mmụọ, nke ihe mgbanaka ọ bụla na-etinyere otu ma ọ bụ okwu abụọ ma ọ bụ okwu. Ihe yiri mgbaaka adịghị ekewapụ onwe ha kpamkpam, mana ihe ha na-ekwu mgbe ụfọdụ na-agafe.Echiche Hibru nke ndị Juu banyere Jọn, na ọhụụ ime mmụọ miri emi, kwekọrọ na ịdị mma nke asụsụ Grik dị n'otu ịdị n'otu dị ebube. Mmụọ Nsọ na-akọwapụtara anyị okwu nke ozioma a ruo taa. Ọ ghọrọ anyị isi iyi nke ihe ọmụma na amamihe na-enweghị ọgwụgwụ. Onye ọ bụla nke na-amụ akwụkwọ a ga-ehulata n'ihu Ọkpara Chineke ma rara ndụ ya nye ya maka ekele na otuto na nnapụta ebighi ebi.
Ònye bụ onye dere akwụkwọ ozi nke anọ?
Gịnị bụ mmekọrịta dị n'etiti nke-anọ gospel na-atọ ndị mbụ ozioma?
Gini bu ebum n'uche nke ozioma nke John?
Ònye ka edere ozi ọma a?
Olee otua o ga - esi nwee ike igbasa ya, mezie ihe okwu ya?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:27 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)